Inona avy ireo antony iraisan'ny fandavana ny e-Visa Indiana?
Antony fandavana e-Visa karana sy torohevitra mahasoa hisorohana azy ireo
Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hisoroka ny vokatra tsy ahitam-bokatra ho an'ny Fangatahana e-Visa Indiana hahafahanao mangataka am-pitokisana ary ho maimaim-poana ny dianao mankany India. Raha manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany ianao, dia hahena ny mety tsy fanekena ny Fampiharana Visa An-tserasera Indiana anao. Azonao atao ny mangataka Fampiharana Indiana Visa Eto.
Fantaro ny fepetra takiana amin'ny e-Visa karana na (Indian Visa Online)
Zava-dehibe ny fahafantarana voalohany ny zavatra ilaina takiana amin'ny e-Visa Indiana alohan'ny hahafantarantsika ny antony mahazatra ny fandavana sy ny torohevitra hisorohana azy ireo. Na dia tsotra aza ny fepetra takiana, dia mbola holavina ihany ny ampahatelony vitsy amin'ireo fangatahana ho an'ny Indian Visa Online.
Fepetra ilaina ho an'ny e-Visa karana dia:
Ny pasipaoro dia tokony ho pasipaoro mahazatra (fa tsy pasipaoro ofisialy na pasipaoro diplaomatika na pasipaoro mpitsoa-ponenana na antontan-taratasy momba ny dia rehetra) izay manan-kery mandritra ny 6 volana amin'ny fotoana hidirana.
Mila fomba fandoavam-bola mety ianao (toy ny Debit na carte de crédit na PayPal) sy ID mailaka manan-kery
Tsy tokony hanana tantaram-pitondrantena ianao. Afaka mamaky momba izany ianao Visa Politikan'i India eto.
Afaka mamaky bebe kokoa momba izany ianao Fepetra takiana amin'ny Visa India Eto.
Ireto ny antony 17 ambony indrindra amin'ny fandavana ny e-Visa Indiana sy ny torohevitra hisorohana azy ireo
Manafina fiaviana ratsy: Fanafenana ny tantaranao momba ny heloka bevava, na dia kely aza izany amin'ny fangatahanao ho an'ny e-Visa karana. Raha manandrana manafina izany zava-misy izany ianao amin'ny Indian Immigration Authority ao amin'ny application India Visa Online anao dia mety ho lavina ny fangatahanao.
Tsy manome anarana feno: Fahadisoana iraisana ity ary mora ialana fa indrisy antony lehibe mahatonga ny fandavana e-Visa karana marobe. Tokony hanome ny anaranao sy ny anaranao ary ny anao ianao anarana afovoany, raha manana 1 ianao. Aza mampiasa inisialy na mandingana anarana afovoany. Ohatra Tony R Baker na Tony Baker fa tsy Tony Ross Baker araka ny aseho amin'ny pasipaoro.
Fampiharana marobe / miverimberina: Ity no 1 amin'ny antony mahazatra ny fandavana ny e-Visa Indiana. Ny dikan'izany dia efa nangataka e-Visa ianao teo aloha izay mbola mavitrika sy manankery. Ohatra: Mety efa nanao fangatahana ianao taloha Business e-Visa ho an'i India izay manan-kery mandritra ny 1 taona ary mamela fidirana maro. Na mety efa manana 1 Taona na 5 Taona ianao Ilay e-Visa mpizahatany ho any India mbola manankery izany fa very ny mailaka na ny printy. Amin'ireo toe-javatra ireo, raha mangataka indray ny e-Visa Indiana ianao dia mety ho lavina izany satria amin'ny fotoana iray dia 1 India Visa Online ihany no avelanao.
Fiaviana Pakistaney: Raha efa nifandray tamin'ny Pakistan sy ny ray aman-dreninao, ny raibe sy ny reninao, ny vadinao ianao na raha teraka tany Pakistan ianao. Amin'ity tranga ity dia toa tsy mahazo fankatoavana ny Fangatahana e-Visa Indiana anao ary tokony hangataka Visa any India mahazatra na mahazatra ianao amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny masoivoho Indiana akaiky indrindra na ny Kaomisiona avo any India.
Tokony handeha any amin'ny masoivoho indianina ianao ary mangataka visa visa amin'ny alàlan'ny fanombohana ny dingana Eto.
Karazana e-Visa tsy mety: Rehefa misy tsy fitoviana eo amin'ny tena tanjonao hitsidika an'i India sy ny karazana e-Visa karana tadiavinao. Ohatra, ny antony lehibe hitsidihanao an'i India dia asa aman-draharaha na ara-barotra voajanahary nefa mangataka Visa Tourist ianao. Ny tanjonao voalaza dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny karazana visa.
Ianaro momba ny karazana e-Visa karana misy eto.
Tapitra tsy ho ela ny pasipaoro: Ny pasipaoronao dia tsy mitombina mandritra ny 6 volana amin'ny fotoana idirana.
Tsy pasipaoro mahazatra: Ny pasipaoro mpitsoa-ponenana, diplaomatika ary ofisialy dia tsy mahazo mandray e-Visa any India. Tsy azonao atao ny mangataka Indian Visa Online na dia anisany ianao firenena mety amin'ny e-Visa Indiana. Raha mila mangataka eVisa ho an'ny India ianao dia mila mandeha amin'ny pasipaoro mahazatra. Ho an'ireo karazana pasipaoro hafa rehetra dia mila mangataka visa nentim-paharazana na ara-dalàna ianao amin'ny alàlan'ny fifindra-monina Indiana any amin'ny Kaonsily indianina akaiky na masoivoho.
Vola tsy ampy: Ny Manampahefana misahana ny fifindra-monina Indiana dia afaka mangataka anao hanaporofo fa manana vola ampy hanohanana ny fijanonanao any India ianao. Ny tsy fanomezana izany vaovao izany dia mety hiteraka fandavana ny e-Visa Indiana.
Sary manjavozavo manjavozavo: Ny sarin-tarehy izay antenainao omena dia tsy maintsy aseho mazava tsara ny tarehinao manomboka eo an-tampon'ny loha ka hatramin'ny saokanao, tokony hanafina ny ampahany amin'ny endrikao izany na ho manjavozavo. Aza ampiasaina indray ny sary ao amin'ny pasipaoronao.
Vakio bebe kokoa momba izany Fangatahana sary India Visa.
Fikarohana pasipaoro tsy mazava: Tsy maintsy mazava tsara ny pejin'ny pasipaoro izay ahitana ny daty nahaterahana, anarana sy laharan'ny pasipaoro, daty namoahana ny pasipaoro ary daty lany daty. Ataovy azo antoka ihany koa fa ny andalana 2 eo amin'ny farany ambany amin'ny pasipaoro antsoina hoe MRZ (Zona azo vakiana andriamby) dia tsy tapaka ao amin'ny kopia scan pasipaoronao na sary nalaina tamin'ny telefaona.
Vakio bebe kokoa momba izany Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa.
Diso momba ny fampahalalana: Ho fanampin'ny tsy fanomezana ny anaranao araka ny voalaza ao amin'ny pasipaoronao, raha misy hadisoana ao amin'ny 1 amin'ny sehatra pasipaoro amin'ny fangatahana e-Visa Indiana, dia azo lavina ny fangatahanao. Koa mitandrema manokana rehefa mameno sehatra manan-danja toy ny laharan'ny pasipaoro, daty nahaterahana, toerana nahaterahana, firenena pasipaoro sns.
Fanovozan-kevitra diso avy any amin'ny firenena misy anao: Ny fangatahana e-Visa Indiana dia mitaky Reference na fifandraisana avy amin'ny firenena misy pasipaoro na firenena niaviany. Ilaina izany raha sendra misy maika. Raha olom-pirenena Aostraliana ianao monina any Dubai na Singapore nandritra ny taona vitsivitsy ary mikasa ny hitsidika an'i India, dia mbola mila manome reference avy any Aostralia ianao fa tsy Dubai na Singapore. Ny reference dia mety ho 1 amin'ny fianakavianao na namanao.
Pasipaoro taloha very: Nangataka Visa vaovao any India ianao ary very ny pasipaoronao taloha. Raha mangataka e-Visa karana ianao satria very ny pasipaoronao taloha dia angatahina ianao hanome tatitra polisy very pasipaoro.
Visa tsy ara-pitsaboana diso: Manao fitsidihana ara-pitsaboana any India ianao ary mangataka visa Visa ho an'ny mpitsabo. Mila mangataka Visa Visa ny marary ary ny namana na fianakaviana 2 dia afaka miaraka amin'ny marary Visa Visa amin'ny Visa Attendant Visa ho an'i India.
Read about E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India ary E-Visa ho an'ny mpitsabo ho an'i India Eto.
Taratasy tsy hita avy amin'ny hopitaly ho an'ny Visa e-Medical . Taratasy mazava momba ny lohatenin'ny hopitaly no takiana amin'ny Hopitaly ho an'ny fitsaboana / fomba / fandidiana ho an'ilay marary mangataka visa e-Medical.
Tsy maintsy takiana Visa e-Business: Mitaky fampahalalana (anisan'izany ny adiresy tranokala) ho an'ny orinasa roa, ny orinasa vahiny an'ny mpangataka ary koa ny orinasa karana izay tsidihina ny Visa Business Online.
Vakio misimisy kokoa momba ny takian'ny India eBusiness Visa.
Karatra fandraharahana tsy hita: Ny fangatahana e-Visa karana ho an'ny orinasa dia mitaky karatra fandraharahana na farafaharatsiny farafaharatsiny, sonia mailaka mampiseho ny anaran'ny orinasa, fanondroana, adiresy mailaka ary nomeraon-telefaona. Ny mpangataka sasany dia manome tsy nahy kopia kopia Visa / Mastercard debit, saingy tsy mety izany.
Nahazo ny e-Visa indianao ianao nefa mbola azo lavina ihany
Raha efa nahazo ny e-Visa India anao miaraka amin'ny satan'ny Granted ianao, na dia misy aza izany mety hisakanana anao tsy handeha ary tsy mahazo miditra ao India. Anisan'ny antony ny:
Ny e-Visa karana navoaka avy amin'ny Manampahefana misahana ny fifindra-monina Indiana dia tsy mifanaraka amin'ny antsipiriany ao amin'ny pasipaoronao.
Tsy manana pejy poakaty na banga 2 ao amin'ny pasipaoronao ilaina amin'ny fitomboka amin'ny seranam-piaramanidina ianao. Mariho fa tsy mila fanisiana tombo-kase any amin'ny Kaonsily India na masoivohon'i India ianao.
Fanamarihana farany momba ny e-Visa Indiana
u Mba hisorohana ny fandavana ny fangatahana e-Visa karana anao dia mila mahafantatra antsipiriany vitsivitsy ianao. Raha mbola manana fanontaniana ianao dia manorata info@evisa-india.org.in or mangataka eto amin'ny Application Visa any India ho an'ny fizotran'ny fampiharana tsotra, mirindra ary mitarika amin'ny fangatahana Indian Visa Online.
Hamarino fa efa nohamarininao ilay fahazoana mandray ny visa any India.
Olom-pirenena Etazonia, Olom-pirenena anglisy, Teratany Aostralia ary Teratany Alemanina afaka ampiharo an-tserasera ho an'i India eVisa.
Azafady mangataka fangatahana e-Visa karana herinandro mialoha ny sidinao.
Fangatahana ho an'ny e-Visa any India